थाहा पाईराखौँ ! यी ४ राशि भएका मान्छेले कहिले पनि अरुलाई धोका दिँदैनन् ! « Onlinetvnepal.com
Published : 23 January, 2019 8:50 pm
यस्ता ४ व्यक्तिसँग कहिलै धन टिक्दैन
गलत जीवनसाथी- यदि जीवनमा कोही गलत मानिसको प्रवेश भएमा तपाईको जीवन अवश्य खराब हुन्छ । तपाईको जीवन बर्बाद हुने निश्चित हुन्छ । रामचरितमानसको अनुसार जसले आफ्नो साथीलाई धोका दिन्छ, ति मानिसहरूलाई जीवनभरि पैसाको कमी रहन्छ ।